Manampy amin’ny fiarovana ny teny Bali ao Indonezia ity wiki ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2018 4:38 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, русский, Ελληνικά, English, čeština , Español, বাংলা, Türkçe, Português, ਪੰਜਾਬੀ, English
Basa Bali app. Sary: Facebook
Mitarika ny fampiasana fitaovana nomerika hanampy amin'ny fiarovana, fampiroboroboana sy famelomana indray ny fiteny Bali any Indonezia ny sehatra tranonkalam-piarahamonina ifarimbonana.
Iray amin'ireo fiteny 707 ao Indonezia ny fiteny Bali. Mifototra amin'ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2011, ahitana olona efa ho roa tapitrisa izay miteny Bali any amin'ny faritanin'i Bali izay manana mponina manodidina ny efatra tapitrisa. Misy ihany koa ireo mpandahateny Bali any amin'ny faritanin'i Sulawesi Atsimo sy Nusa Tenggara Andrefana. 261 tapitrisa ny fitambaran'ny mponina ao Indonezia.
Noho ny fitsipiky ny governemanta, ampitaina mandritra ny antsasak'adiny isan'andro ihany ny fandaharana amin'ny teny bali amin'ny fahitalavitra ao Bali, raha mametra ny fampianarana amin'ny teny Bali ho adiny roa monja isan-kerinandro na latsaka ny sekoly. Na dia mikendry ny hampiroborobo ny fampiasana ny Bahasa ho toy ny fiteny nasionaly aza ireo fitsipika ireo, dia mampanano-sarotra ny fampiroboroboana ny fampiasana sy ny fampandrosoana ny fiteny ao an-toerana toy ny Bali.
Mikasa hanova ny fihenanan'ny lazan'ny Bali eo amin'ireo tanora, nanomboka niara-niasa tamin'ny taona 2011 ny vondrona mpahay teny, antropologista sy mpianatra miasa ao anatiny sy ivelan'i Bali mba hiarovana ny teny Bali ho matanjaka sy maharitra.
Antsoina hoe Basa Bali (Basa midika hoe fiteny na kabary amin'ny teny Bali) ny tetikasa lehibe, rakibolana wiki sy rakipahalalana media maro lafy amin'ny fiteny Bali-Anglisy-indoneziana. Mikendry ny hampiditra ny Bali ho ao anatin'ny tontolo nomerika amin'izao fotoana ary koa hananganana loharanom-piteny nomerika maimaim-poana izany.
Alissa Stern, mpanorina ny Basa Bali, nilaza tamin'ny Planet World hoe nahoana ry zareo no nanao ny tetikasa:
Manana mpiteny an-tapitrisany ny Bali; amin'ny lafiny iray, eo amin'ny ampahefatry ny mponina ao Bali ihany no afaka miteny izany. Noho izany dia mihena ny fampiasana azy, nefa mbola manana fototra mafy orina izy, izany no mahatonga anay mirotsaka an-tsehatra ankehitriny.
Ny wiki dia manome rakibolana, tranom-boky miaraka amin'ny loharanom-baovao momba ny kolontsaina Bali, lalaon-teny, fitaovana fandikan-teny, ary endrika amin'ny teny Bali ao amin'ny pejy fandraisan'ny Google. Azo ampiasaina amin'ny fampiharana Android ihany koa ny wiki.
Pikantsary tao amin'ny pejin'ny tranom-boky virtoalin'ny Basa Bali. Screenshot of Basa Bali's virtual library page
Milaza i Stern fa ny tetikasan'izy ireo “dia afaka mamorona fifandraisana tena manan-danja eo amin'ny manam-pahaizana sy ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina, izay sarotra ampifandraisina.” Nofaritany ny anjara toeran'ny vondrom-piarahamonina tamin'ny fampidirana ny dikan-teny vaovao tsirairay tao amin'ny rakibolana:
Manana ireo famaritana isika, izay nampidirin'ireo ekipa 15 mpandalina fiteny, ary koa ekipa hafa eo amin'ny fito na valo, mpianatra fiteny manana master na Ph.D. Avy eo izahay nangataka ny fiarahamonina mba hanome ohatra fehezan-teny aminay, mampiasa ny teny amin'ny karazana fiteny ampiasain'izy ireo amin'izao fotoana izao, ary manana ekipa mpanonta mandika ny fehezan-teny ho amin'ny teny Anglisy sy Indoneziana izahay. Mandefa sary sy lahatsary ihany koa ny olona, mba hahafahan'ny mpampiasa mahita sy mandre olona mampiasa ny teny Bali.
Ohatra, raha mikaroka ny fandikan-teny Bali amin'ny teny Anglisy horohorontany ianao dia hahazo ny “linuh” ary ahitana ny teny voalaza ny vokatra.
Pikantsary avy amin'ny rakibolana Basa Bali, Ahitàna lahatsary fohy mampiseho ny fomba fampiasan'ny Bali ny teny hoe “linuh” amin'ny kabary ny vokatra:
Izao no voalaza ao amin'ny lahatsary:
Tamin'ny fivoriana momba ny fanangonam-bola hanavaozana ny ‘banjar’, I Made Rai nanolo-kevitra ny hanaovana bazzar sakafo. Mpikambana marobe no nanaiky hanao izany, taorian'izay anefa, vitsy ihany no nanampy tamin'ny fitantanana ny bazzar. Tahaka ny horohorontany nitranga ho azy izany, nanao ny asa rehetra i Made Rai, manomboka amin'ny fanamboarana tapakila hatramin'ny fanaterana ny sakafo.
Nanatona sekoly, fokonolona sy ny biraon'ny governemanta ihany koa ny ekipa ao ambadiky ny Basa Bali mba hampiroborobo ny teny Bali. Noho ny fiarovana ataon'izy ireo antserasera sy ivelan'ny aterineto, dia nahazo ny Loka Iraisam-pirenena Linguapax tamin'ny taona 2018 izy ireo. Ity ambany ity ny ampahany amin'ny lahatsoratra fanomezam-boninahitra ny asan'ny Basa Bali:
… namorona rindrambaiko media maro lafy ifandraisana izy ireo mba hampianatra ny teny Bali amin'ny fomba fiasa maoderina, nahazo fahazoan-dalana avy amin'ny governemanta teo an-toerana izy ireo amin'ny fampiasana ny teny Bali rehefa zoma ary nanao ezaka maro hafa teny ifotony mba handrisihana sy hametrahana ny fampiasana ny teny Bali eo amin'ny vondro-piarahamonina ao an-toerana sy iraisam-pirenena .
Manoratra ao amin'ny Stanford Social Innovation Review, nilaza i Stern fa ny fanilikilihana ny tenim-paritra eo an-toerana dia “iray amin'ireo vokatra mahatsiravina amin'ny vanim-potoanan'ny aterineto.” Nampiany ihany koa fa afaka mamaha izany ny tetikasa toy ny Basa Bali:
Amin'ny alàlan'ny fanavaozana indray ny fitaovana nomerika ho an'ny fiteny eo an-toerana, mety ho lasa loharanom-pahalalana amin'ny fahasamihafan'ny fiteny sy ny kolontsaina ny teknôlôjia.